सबैथोक पाउने व्यक्ति खुसी हुन सक्ला, तर सबैथोक छोड्न जान्ने व्यक्ति मात्र सुखी हुन सक्छ – Health Post Nepal
२०७८ कार्तिक ६ गते
सबैथोक पाउने व्यक्ति खुसी हुन सक्ला, तर सबैथोक छोड्न जान्ने व्यक्ति मात्र सुखी हुन सक्छ
२०७६ पुष १३ गते २१:१०
बुद्धसित एक राजाले सोधे, ‘मेरो राजकुमार तानावमा रहिरहने र डराउने कारण के हो ?’ बुद्धले भने, ‘तपाईंको सम्पत्ति नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो जसका कारण राजकुमारले सुखको अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन् ।’
प्रचलित बौद्ध कथा छ–
शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धछेउ एक राजा आएर सोधे– हाम्रो राजकुमार जसलाई हरतरहका सुविधा छन्, जो ठूलो महलमा बस्छ, जोसित नोकर–चाकरको पूरै फौज छ, तर ऊ खुसी छैन । ऊ हरपल तनाव र चिन्ताले घेरिएको देखिन्छ । मैले उसलाई सबै किसिमका सुविधा दिएर हेरेँ तर ऊ प्रशन्न हुन सकिरहेको छैन । जब कि, तपाईंका यी भिक्षु जो पदयत्रा गर्छन्, जे मिल्छ त्यही खान्छन्, जस्तो कुटी मिल्छ त्यहीँ रहन्छन्, तर यिनको मुहारमा सदैव खुसी रहन्छ । यसको कारण के हो ?
छुट्नु र छोडिदिनु, यी दुईमा ठूलो अन्तर छ । छुट्नु वा छुट्ने सोचले हामीलाई डराउन सिकाउँछ, जब कि छोडिदिनु वा छोड्ने संकल्प लिनुले हामीलाई आत्मविश्वास र प्रशन्नताले भरिदिन्छ ।
बुद्धले उत्तर दिए– यदि खुसी खोज्छौ भने उसमा खोज जोसँग केही पनि छैन । जसले संकल्प गरेर सबैथोक छोडिदियो, उही नै खुसी रहन सक्छ । जो स्वेच्छाले चिजबिजलाई त्याग गर्छ, उही नै सदैव प्रशन्न रहन सक्छ । भिखारी कहिल्यै खुसी हुन सक्दैन, किनकि उसले छोडेको हुँदैन । ऊ त अभावमा पनि जीवन बाँचिरहेको छ । अभावको जीवन बाँच्नेवाला कहिल्यै खुसी हुन सक्दैन, चिन्ताले उसलाई सधैँ घेरिरहन्छन् । जसले जानी–बुझी छोडेको छ, ऊ खुसी हुन सक्छ ।
यी दुई भिन्न कुरा हुन्– एक छोड्नु, एक छुट्नु । यसरी नै तपाईंको राजकुमार सबै सुविधाले परिपूर्ण छन्, तर उनको मनमा ती सुविधा छुट्ने डर रहिरहन्छ । छुट्नु र छोडिदिनु, यी दुईमा ठूलो अन्तर छ । छुट्नु वा छुट्ने सोचले हामीलाई डराउन सिकाउँछ, जब कि छोडिदिनु वा छोड्ने संकल्प लिनुले हामीलाई आत्मविश्वास र प्रशन्नताले भरिदिन्छ ।
जसलाई कुनै चिज मिलेको छैन भने त्यसको त्याग गर्न सकिँदैन । त्यागी त्यो हुन्छ, जो आफ्नो स्वतन्त्र मनले त्याग गरिदेओस् । साधन–सुविधासम्पन्न व्यक्ति पनि खुसी रहन सक्दैन, उसलाई धन वा पैसाको सुरक्षाको चिन्ताले सताउँछ । ऊ सधैँ भयभीत हुन्छ । निडर मात्र ऊ नै हुन सक्छ, जसले स्वेच्छाले त्याग गरेको छ ।
राजालाई आफ्नो जिज्ञासाको समाधान मिल्यो ।
सरकारी चिकित्सकको सेवा–सुविधा थपिँदै
घरमा कुकुर पाल्नुभएको छ? होस गर्नुहोस् हुनसक्ला यस्ता समस्या
घट्यो कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने संख्या, डेढ महिना यताकै कम
खोपमा विभेद (अकथा)
शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न योग
टाउको दुखाईबाट राहत पाउन गर्नै पर्ने योगासन
स्वस्थ र फिट रहन अपनाउनुस् यी योगासन
टाढा हुँदा यसरी राख्न सकिन्छ सम्बन्धलाई सुमधुर
योग गरौं, उचाइ बढाऔं